ဒုက္ခ	Posted on January 1, 2010	by mettayate ဒုက္ခသုံးမျိုး
ဒီတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာမှာ ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ် ပျက်သွားတယ်ဆိုတာ ဉာဏ်နဲ့သိပေးရင် ၀ိပဿနာဖြစ်တာပါပဲ။ ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှ တရားရှုမယ်ဆိုရင် ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာအောင် အနည်းဆုံးနာရီဝက်ကျော်ကျော်လောက် ထိုင်ရမယ်။ ဒီလိုစောင့်နေတော့ ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ခင် နာရီဝက်လောက်အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ သုခဝေဒနာကို တရားမရှုရဘဲ အလကားဖြစ်သွားတာပေါ့။ တချို့က ၀ိပဿနာကို လောကီစီးပွားရေးအလုပ်တွေကို ဉာဏ်မပါဘဲ ၀ီရိယတစ်ခုထဲ အားကိုးပြီး ကြုံးရုန်းလုပ်ရင် ရမယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ ဉာဏ်မပါရင် မဂ်ဖိုလ်ကို ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ဘူး။ ၀ိပဿနာမှာ ဉာဏ်ပညာက ခေါင်းဆောင်ပဲ။ ၀ီရိယ၊ သတိ သမာဓိတို့က နောက်လိုက်ပဲ။ ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီဘ၀မှာ မဂ်ဖိုလ်မရကြတာ ဉာဏ်ပညာမရှိလို့ပါ။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← အနိစ္စာနုပဿနာ ရှုပွားနည်း